Ahoana ny fomba hisarihana alika
Ahoana ny fandokoana saka, alika, unicorn? Afaka manao sary tsara ny hafa, fa tsy haiko ny manao azy. Mianara manao sary ho an'ny ankizy - ianao sy ny zanakao dia hianatra manao sary miaraka amin'ireto torolàlana manaraka ireto.
Mianara mamorona alika
Ireto misy toro-lalana tsotra hanampy anao hanomboka hanao sary. Manoro hevitra izahay ny hanomboka ny sary amin'ny pensilihazo, satria ny tsipika sasany dia tsy maintsy esorina indray. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny torolàlana.
Ahoana ny fomba hisarihana tigra
Ahoana ny fanaovana sary ny ranomandry | ririnina
Ahoana ny fomba hisarihana elefanta
Ahoana ny fomba fanaovana sary trondro
Ahoana ny fanaovana sary ny balaonina rivotra mafana